Site Ọganihu | Outboard Boat Motor Mmezi
Comments banyere nke a na saịtị ahụ na-enwe ọganihu m na-eme, nakwa dị ka chinchi m mkpa ndozi.
osụk site ttravis na Solomon, 06 / 05 / 2017 - 20: 12
New Videos Page na Ikwu Pages
M nnọọ kwukwara ọhụrụ Videos peeji nke dị ka nke ọma dị ka ọtụtụ Comment Categories....... Tom
osụk site ttravis Na Sun, 11 / 05 / 2017 - 13: 32
Akụkụ, Akụkụ, Akụkụ
Naanị mmelite. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị dị ka ihe dị n'elu, m na-arụsi ọrụ ike na-abanye na mpaghara n'ime nchekwa data. Enweghị m ozi a na kọmputa, n'ihi ya, m ga-enwerịrị ịbanye ya na ụzọ ochie.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-ele motọ n'ihu 1980, ị na-ahụ ndepụta nke akụkụ maka moto ahụ, ọ bụrụ na ọ dị. N'oge okpomọkụ a gara aga, abanyela m na 1980 niile nke Evinrude / Johnson / OMC / BRP. Nke a bụ nnukwu ọrụ, mana m nwetara ya. Ugbu a, m na-abanye n'akụkụ niile na Catalog Catalonia na-akpọga ha na motọ ha na-arụkọ ọrụ, yana njikọ Amazon. Ugbu a, m na-abanye na piston ma nwee ihe gbasara 100 ọzọ maka ibe m! Ekwenyere m na ihe ga-esi na ya pụta ga-aba uru.
M na-ede ụfọdụ ihe omume omenala iji nyere aka na ntinye akwụkwọ, ma na mbụ, m ga-enweta akụkụ niile ahụ.
Emere m njikọ na 2018 Sierra Catalog so ndị mmadụ nwere ike ịchọ akụkụ ndị m na-abanyebeghị.
Enwere m ebe ọzọ saịtị m chọrọ ka m dị ọcha, mana maka ugbu a, Achọrọ m ịnweta akụkụ data niile.
osụk site ttravis Na Sun, 09 / 30 / 2018 - 12: 14
Akụkụ ndị ọzọ na motors.
M na-eru nso na njedebe nke na-ejikọta ogologo ndepụta nke akụkụ na motọ ha na-arụkọ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, m na-abanye na tebụl ngwa ngwa ka onye ọ bụla wee dọba ụgbọala ha, a ga-egosipụta ndepụta nke akụkụ ndị ahụ maka moto ahụ. Nke a bụ ọrụ ka ukwuu karịa ka m chere, ma ana m anọ na peeji nke ikpeazụ.
Ọ bụ ezie na m gbalịsiri ike ịdị ka ihe ziri ezi dị ka posible, enwere ike ịbụ ụfọdụ njehie. Ọ bụrụ na ị hụ akụkụ nke ị maara anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ moto gị ma ọ bụ ihe ọ bụla a chọrọ idozi, biko mee ka m mara site na ịdee okwu ebe a.
Enwere m ọtụtụ ihe na usoro a, karịsịa ihe na-adịghịzi enwe maka ụfọdụ ndị toro eto. Enwere m olileanya ịlaghachi ma mee nyocha iji hụ ma enwere m ike ịchọta ngwọta ndị na-apụtaghị ìhè. A nabatara ihe ọ bụla ma ọ bụ ndụmọdụ ma a ga-eji ya mee ihe maka ndị ọzọ.
Ugbu a anyị nwere ọtụtụ asụsụ a, enwere m ọhụụ na ọtụtụ ndị ọbịa anyị nwere gburugburu na ole asụsụ ha na-eji. Ana m anabata onye ọ bụla dị ka anyị niile yiri ka anyị nwere ịhụnanya maka motọ anyị na-arụ ọrụ.
Enwere m ọtụtụ echiche banyere otu esi melite saịtị a ma na-etinye ọtụtụ mgbalị n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. Ihe atọ m chọrọ itinye na saịtị ahụ bụ props, ihe ọkụkụ, na akwụkwọ ntuziaka. Ihe ndị a bụ ihe ọtụtụ mmadụ yiri ka ha na-achọ. Nọrọ na-ege ntị ma nọgide na-eleghachi azụ.
osụk site ttravis on Tọs, 10 / 25 / 2018 - 17: 33
Ahịa maka akụkụ na eBay
M kwukwara otu nhọrọ maka akụkụ nke ọ bụla ịzụ ahịa maka akụkụ ahụ na eBay.
Agafere m akụkụ ndepụta niile ma gbakwunye ajụjụ nke ga-emepụta nsonaazụ. Mgbe ụfọdụ, m ga-eji okwu dị iche iche dị iche iche na / ma ọ bụ akụkụ nọmba iji nweta ezigbo nsonaazụ.
N'oge usoro a, ana m agbakwara ajụjụ Amazon ahụ ka ha wee buru ndị ọrụ na saịtị Amazon maka mba ha.
Na-arụ ọrụ ma Amazon na eBay, na-ele otu akụkụ na nke ọ bụla, mgbe ụfọdụ, m na-ahụ nnukwu ego dị n'etiti abụọ. Mgbe ụfọdụ, Amazon ga-enwe ọnụahịa kacha mma, mgbe ụfọdụ eBay nwere ọnụahịa kacha mma. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịchọta ihe kachasị mma gị site na ile anya abụọ ahụ.
Imirikiti akụkụ nke eBay adịghị na nghazi ngwugwu. A na-egosi ọnụahịa gị dị ka "Zụta ya ugbu a" ọnụahịa, ọ dịghịkwa usoro nkedo ọ bụla.
Ka ị na-enyocha akụkụ ndị a nile na eBay, enwere m uche na ndị na-ere akụkụ ahụ bụ otu ndị ị ga-ahụ n'akụkụ ngalaba nke ndị na-ere ahịa na ụlọ ahịa na-echekwa. Naanị ha na-achọta ụzọ ọhụrụ ha si ere ngwaahịa ha na Intanet. O yikwara ka enwere ọchioma kachasị mma ma sie ike ịchọta akụkụ na eBay.
Otu ihe m mụtara bụ okwu "NOS" nke pụtara "Agba Ọhụrụ Ọhụrụ" nke pụtara na ọ dị n'ọnọdụ ọhụrụ ma ọ nọdụrụ ala n'elu ọtụtụ afọ. Nke a sụgharịrị dị mma maka gị.
Na-ele anya n'ọdịnihu, Achọrọ m ịmepụta nhọrọ nke ndị ọkwọ ụgbọala maka moto ọ bụla, yana akwụkwọ ntuziaka, na ogwe ọkụ. Ozugbo m nwere ihe ndị a nile, achọrọ m ịlaghachi na motọ ahụ ma tinye nkọwa gbasara ụgbọala ọ bụla ma eleghị anya ọzọ.
Olileanya, site n'oge a n'afọ ọzọ, m ga-emepụta saịtị a nke bụ Johnson / Evinrude / OMC / BRP ma malite na Mercury / Yamaha na ụdị ndị ọzọ.
Dị ka mgbe niile, ana m enwe ekele maka ihe ị zara na nzaghachi.
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 06 / 12 / 2019 - 16: 44
Na-arụ ọrụ na saịtị.
O nweela oge ebe ọ bụ na ekwuola m ihe ọ bụla na nkwupụta ọganihu saịtị, mana nke ahụ apụtaghị na anaghị m arụ ọrụ. N'oge na-adịbeghị anya, agbakwunyere mpempe akwụkwọ maka ọtụtụ ụdị ma e wezụga Johnson / Evinrude. Mpempe akwụkwọ maka ụdị ndị ọzọ ga-abụ ihe mbụ ị na-egosi na anyị na Johnson / Evinrude dị nso na njikere ịkwaga Mercury, Yamaha, Honda, ma eleghị anya ọzọ.
Ugbu a, m na-akwadebe iji tinye propellers. Ọ na-ewute m mgbe m na-azụ ihe ndị m na-eme n'ihi na enweghị m ụzọ dị mma ịmara ihe niile dị ma na-arụ ọrụ na moto m. Ana m agbalị iwepu sayensị voodoo ma mee ka m gbanwee ngwa ngwa dịka m mere na ogwe ọkụ.
Anọ m na-eme ụfọdụ n'azụ mmepụta ihe. Ihe kachasị bụ eziokwu na mgbakwunye nke nchedo SSL, ya mere adreesị nke ibe niile na-amalite na https: // ..... Na-enweghị nchekwa SSL, ndị mmadụ ga-enweta ozi na-ekwu ihe dị ka "saịtị a enweghị nchebe," nke nwere ike ịkụda mmụọ. Ugbu a, a ga-enwe akara mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ na ngere adreesị nke ihe nchọgharị gị. Kemgbe a na-eme nke a, okporo ụzọ na-arịwanye elu, karịsịa okporo ụzọ mba. Ihe oyiyi dị n'okpuru na-egosi ebe ndị mmadụ gara na saịtị a site na May nke 2019. Echere m na anyị na-enweta ụwa dum ma e wezụga maka Central Africa. Ndị mmadụ n'ụwa nile dị ka idozi ihe mgbochi ha. Anụrụ m site na ndị nwere ekele maka saịtị ahụ a sụgharịrị n'asụsụ ha.
Daalụ maka nkwado gị.
osụk site ttravis on Tọs, 10 / 24 / 2019 - 13: 38
Otu onye hapuru webusaiti ahụ. Ekwesịrị m ịlaghachi na nkwado site n'izu ole na ole gara aga ma tufuo azịza ole na ole kachasị ọhụrụ (na weebụsaịtị, ọ bụghị facebook). Ọ bụrụ na ịhapụ ajụjụ na weebụsaịtị wee nweta azịza, biko nwaa ọzọ. Nsogbu a dị ugbu a. N'ụzọ bụ isi oge ọ bụla mmadụ chọrọ Google maka ihe dị na saịtị a, kwuo akụkụ ma ọ bụ moto wee pịa na njikọ ọchụchọ Google na-akpata, a ga-atụgharịghachi gị na peeji nke spam na-ere iberibe. Edozi nsogbu a, m na-elezi ya anya. N’echere, nke a enyeghị onye ọ bụla nsogbu.